Unicredit Says To Buy Back Stock This Year, Cut9Percent of Staff | Myanmar Business Today
Home Business International Unicredit Says To Buy Back Stock This Year, Cut9Percent of...
Italy’s biggest bank UniCredit said on Tuesday it would buy back its stock this year to improve returns for investors, and shed9percent of staff underanew plan to 2023 to cut costs by 1 billion euros ($1.1 billion) in Western Europe.
The bank, which is still struggling to lift its share price after years of successful restructuring, said it was raising this year’s capital distribution to 40 percent of underlying net profit by addingashare buyback toaproposed 30 percent dividend payout.
It aims to lift the overall ratio to 50 percent in 2023.
Mustier has said that’s while mergers and acquisitions (M&As) are necessary, low bank valuations at present prevent them because the required capital raising would excessively dilute shareholders’ stakes.
UniCredit also said it sees revenue growing an average 0.8 percent annually in 2018-2023, and costs falling by 0.2 percent over the same period.
အီတလီနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော ဘဏ်ဖြစ်သည့် UniCredit က ကုမ်ပဏီအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ဝင်ငွေတိုးတက်စေရေးအတွက် စတော့ရှယ်ယာများ ပြန်ဝယ်သွားမည်ဖြစ်ကာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် စီမံချက်အသစ်အရ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယူရိုငွေ ၁ ဘီလီယံမျှ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာသည်အထိ ဘဏ်၏ ရှယ်ယာဈေးများ ပြန်တက်လာအောင် လုပ်ရာတွင် အခက်ကြုံနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာအမြတ်ငွေ ၃၀ ရာခိုင်းနှုန်းတွင် အစုရျယ်ယာ ပြန်ဝယ်ယူမှုထည့်ပေါင်းလျက် အမြတ်ငွေခွဲဝေမှုကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဘဏ်က ဆိုသည်။
လာမည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်တော့ စုစုပေါင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းက အကြီးအကဲရာထူးကို လက်ခံရယူခဲ့သည့် UniCredit Cheif Executive ဖြစ်သူ Jean Pierre Mustier ကတော့ UniCredit ဘဏ်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီငယ်များကိုသာ ဝယ်ယူရန် စဥ်းစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီချင်း ပူးပေါင်းခြင်း၊ အခြားကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူခြင်းများမှာ အရေးကြီးသော်လည်း လက်ရှိ ဘဏ်၏ တန်ဖိုးကျနေခြင်းက လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နိုင်သောကြောင်း ကုမ္ပဏီချင်း ပူးပေါင်းမှု၊ အခြားကုမ္ပဏီများကို ဝယ်ယူမှု လုပ်၍ မရအောင်ဖြစ်နေကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
Next articleSouth African Coal Price Surge, While Others Languish, Is Troubling: Russell